ထိပ်တန်းမင်းသားမင်းသမီး​တွေ မပါဝင်​ပေမဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်း မြင့်ခဲ့တဲ့ 2021 ခုနှစ် K-Drama (6) ခု
ပုံမှန်အားဖြင့် နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီး​တွေ ပါဝင်တဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲအများစုဟာ ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်​လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ လက်ရှိပြသ​နေတဲ့ “Jirisan” နဲ့ “Now, We are Braking Up” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေဟာဆိုရင် မင်းသမီး Jun Ji Hyun နဲ့ Song Hye Kyo လို အနုပညာ​ကြေးမြင့်တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး​တွေ ပါဝင်တာ​တောင် ထင်ထားသ​လောက် ကြည့်ရှုနှုန်းမမြင့်တဲ့အတွက် netizen ​တွေက ထိပ်တန်းမင်းသားမင်းသမီး​တွေ ပါဝင်ရုံနဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်ဖို့ အာမမခံနိုင်​တော့ဘူးလို့ ​သုံးသပ်​​နေကြပါတယ်။
အခု​နောက်ပိုင်း K-drama ပရိသတ်​တွေဟာ မင်းသားမင်းသမီးထက် ဇာတ်ညွှန်း၊ သရုပ်​ဆောင်​ကောင်းမှု၊ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်​​တွေကို ပိုပြီး အသား​ပေးကြည့်ရှုလာကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကို သက်​သေပြ​နေတဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်​ဆောင်​တွေ မပါဝင်​ပေမဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထွက် drama (၆) ခုရှိ​နေပါတယ်။ အဲ့ဒီ drama တွေက​တော့
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်​တွေအတွင်းမှာ မင်းသမီး Shin Hye Sun ဟာ ကြည့်ရှုနှုန်း အ​တော်အသင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာမှာ သရုပ်​ဆောင်ခဲ့​ပေမဲ့ A-list သရုပ်​ဆောင်စာရင်းမှာတော့ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ မင်းသား Kim Jung Hyun ဟာလည်း “Crush Landing On You” ဇာတ်လမ်းတွဲ​ကြောင့် စပြီး လူသိများလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့​​သော်လည်း “Mr. Queen” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ​မျှော်မှန်းထားတာထက် အရမ်းကို ​အောင်မြင်ခဲ့ပြီး Kim Jung Hyun နဲ့ Shin Hye Sun တို့ဟာလည်း တစ်ဟုန်ထိုး ​နာမည်​ကျော်ကြားလာကာ ပိုပြီး လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ရှုနှုန်းကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပျမ်းမျှ ၁၂.၅၈၁% ကို ရရှိခဲ့ပြီး tvN သမိုင်းမှာ ကြည့်ရှုနှုန်း အမြင့်ဆုံး drama ​တွေထဲက တစ်ခုအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ မင်းသား Jung Il Woo နဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Kwon Yuri တို့ ပါဝင်တဲ့ သမိုင်း​နောက်ခံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသရုပ်​ဆောင် ၂ ​ယောက်လုံးဟာ အရည်အချင်းရှိကြ​ပေမဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်မား​ဖို့​တော့ အာမခံချက်မ​ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့လည်း MBN လို ရုပ်သံလိုင်း​အ​သေးစား​လေးက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ပျမ်းမျှကြည့်ရှုနှုန်း ၉.၇၅% ကို​တောင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာဆိုရင် K-drama ​တွေဟာ ယခင်ကလိုမဟုတ်ပဲ ကြည့်ရှုနှုန်း ၈% ​လောက် ရဖို့ကို​​တောင် မနည်းရုန်းကန်​နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် “Bossam: Steal the Fate” ရဲ့ ​အောင်မြင်မှုဟာ အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“One The Woman” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် Honey Lee, Lee Sang Yoon နဲ့ Jin Seo Yeon စတဲ့ သရုပ်​ဆောင် ၃ ​ယောက်က ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်​ကောင်​တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသရုပ်​ဆောင် ၃ ဦးလုံးဟာ အ​တွေ့အကြုံရင့်​နေပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်​ဆောင်​တွေဆို​ပေမဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံက လူလတ်ပိုင်း ပရိသတ်​တွေ​လောက်နဲ့သာ ရင်းနှှီးကြပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မ​မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ အမြင့်ဆုံးကြည့်ရှုနှုန်းအ​နေနဲ့ ၁၇.၈% ကို​တောင် ရရှိခဲ့ပြီး Song Hye Kyo ရဲ့ “Now, We Are Breaking Up” ဇာတ်လမ်းတွဲထက်​တောင် “One The Woman” က ကြည့်ရှုနှုန်းပိုများခဲ့ပါတယ်။
“Taxi Driver” ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိကမင်းသားနဲ့ မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Lee Je Hoon နဲ့ Esom တို့ဟာ သရုပ်​ဆောင်ထူးချွန်တဲ့သူ​တွေဆိုတာ ပရိသတ်​တော်​တော်များများ သိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ယခင်က သူတို့ ​​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသား၊မင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေဟာ ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ကြီး တစ်ခါမှ မရရှိခဲ့ဖူးတာ​ကြောင့် “Taxi Driver” ကိုလည်း ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။
သို့​သော်လည်း ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ အပိုင်း ၄ က စလို့ ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၀% ​အောက်ကို လုံးဝ မဆင်းခဲ့ပဲ အမြင့်ဆုံး ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၆% ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း SBS က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ drama ​တွေထဲမှာ rating အမြင့်ဆုံး drama တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသားမင်းသမီး​တွေဖြစ်တဲ့ Ahn Hyo Seop နဲ့ Kim Yoo Jung တို့ဟာ နာမည်ရှိပြီးသား၊ ပရိသတ်အချစ်​တွေရဲ့ အချစ်ကို လက်ခံရရှိပြီးသား သရုပ်​ဆောင်​တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ​ပေမဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ သမိုင်း​နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာဆိုရင် ဒီလိုသမိုင်း​နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွဲများစွာ ထွက်ရှိခဲ့တာ​ကြောင့် ကြည့်ရှုနှုန်းက သာမန်​​လောက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပရိသတ်​တွေက ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ သရုပ်​ဆောင်​တွေရဲ့ အရည်အချင်း၊ အဓိကဇာတ်​ဆောင် ၂ ဦးကြားက chemistry၊ ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ အရည်အ​သွေးမြင့်ရိုက်ချက်​တွေ​ကြောင့် ကြည့်ရှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးအ​နေနဲ့ ၁၀.၄% ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
6. The King’s Affection
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ လက်ရှိ KBS2 ရုပ်သံလိုင်းက​နေ ပြသ​နေဆဲဖြစ်ပြီး SF9 အဖွဲ့ဝင် Rowoon နဲ့ မင်းသမီး Park Eun Bin တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီ ၂ ​​ယောက်လုံးဟာ K-drama ပရိသတ်​တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဆို​ပေမဲ့ Rowoon ကလည်း အခုမှ နာမည်ရခါစ တက်သစ်စ ​ငွေကြယ်ပွင့်တစ်ဦးဖြစ်သလို Park Eun Bin ကလည်း သရုပ်​ဆောင်​လောကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်မဟုတ်တဲ့အတွက် အစပိုင်းမှာ​တော့ ကြည့်ရှုနှုန်းဟာ သာမန်ပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ အပိုင်း ၇ ​လောက်ကစပြီး ကြည့်ရှုနှုန်းဟာ တ​ဖြေး​ဖြေး မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးအဖြစ် ၁၀% ထိ ရရှိထားပါတယ်။ ​ဆက်လက်ပြီး​​တော့လည်း ကြည့်ရှုနှုန်းက မြင့်တက်လာဦးမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Photo : KBS, SBS, MBN, tvN
Next မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အနစ်နာခံ ပံ့ပိုးမှုတွေအကြောင်း ကျေးဇူးတင်စွာ ပြောပြခဲ့တဲ့ သားလိမ္မာလေး J-Hope »
Previous « အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် လူသိများအားကျခံရတဲ့ တရုတ်မင်းသမီးအတွဲ (9) တွဲ
ချစ်သူ Luhan ရဲ့ သစ္စာရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Guan Xiaotong ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ အဖြေတစ်ခု
မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ Mario Maurer နဲ့ Baifern Pimchanok တို့ရဲ့ အချစ်ရုပ်ရှင်ကားသစ်
2022 မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ယောင်းရိုလေး (Jisoo)